Famerenana Semalt: Inona ary Ahoana?
Ny fandraharahana madinika rehetra te-hampitombo ny fifamoivoizan'izy ireo. Ho an'ny orinasa an-tserasera, no fototry ny fahombiazan'izy ireo.
Ny fanontaniana lehibe dia ny hoe "Ahoana?"
Aiza ianao no mihodina serivisy SEO maimaim-poana sy andoavam-bola izay tena miasa?
Tsara, fitaovana iray mety hanatsara ny fampandehanana ny lozisialy sy ny fifamoivoizana dia Semalt.
Ka ao anatin'ity fandinihana Semalt ity, hanampy anao hamantatra izahay raha tena mendrika izany.
Ity no ho hitantsika:
Inona moa ny Semalt.com?
Fanamarihana momba ny mpanjifa Semalt
Ahoana ny fampiasana Semalt
Eto amin'ny Semalt dia manana fitaovana momba ny SEO (Search Engine Optimization) isika.
Irahinay ny hahomby amin'ny orinasan-tserasera mahomby, tsy amin'ny SEO ihany, fa amin'ny serivisy toa ny fampandrosoana web, analytics ary famokarana horonantsary koa. (Bebe kokoa amin'ny serivisy taty aoriana).
Saingy tsy orinasa orinasa SEO fotsiny izahay. Tianay ny zanak'olombelona voakasik'ity orinasa ity.
Ary afaka hihaona amin'ireo ekipan'ny mpiara- miasa aminay (sy ny sokatra) isika , manomboka amin'ny fampandrosoana ny fandrosoana ka hatramin'ny fahombiazan'ny mpanjifa mankany amin'ny loharanon'olombelona. Azonao jerena ny andraikitry ny olona tsirairay, mianara vitsivitsy amin'ny fialambolinay, ary afaka miantso an'izay rehetra andro aman'alina isika. (Afaka miteny anglisy, frantsay, italiana, tiorka, ary fiteny hafa maro isika!)
Misy mpikambana iray ao amin'ny ekipa izay tena mahafaly anay: Turbo.
Rehefa nifindra tany amin'ny birao vaovao izahay tamin'ny 2014 dia nahita Turbo tao anaty vilany voninkazo tranainy isika. Ilay tompona birao teo aloha dia navelany teo ihany.
Oh, tokony hiresaka isika fa sokatra ny turbo.
Nanomboka tamin'io fotoana io dia natsanganay ho toy ny mascôtista izahay ary orinasa. Mipetraka ao amin'ny aquarium lehibe ao amin'ny toerana misy anay any Ukraine izy izao.
Ka inona no azon'ny mpikamban'ny ekipa ho anao? Isika rehetra momba SEO.
Search Engine Optimization dia rehefa mampihatra ny fanao sasany mba hahitana ny tranonkalanao ho avo kokoa amin'ny valin'ny fikarohana. Ny SEO dia misy organika rehetra, fa mifanohitra amin'ny fahazoana dokambarotra karama.
Ka raha manana tranokala ianao ary te hampitombo ny fifamoivoizana dia mila tafiditra ao amin'ny drafitrao ny SEO.
Ny foibe fanaovana SEO mampifaly ny milina fikarohana malaza indrindra - Google. Ary Google dia manana algorithm izay mametraka valim-pikarohana mifototra amin'izay heverin'ny mpandinika azy.
Amin'ny ambaratonga fototra indrindra, azonao atao ny mizara SEO amin'ny fizarana roa: ao amin'ny pejy SEO ary SEO tsy misy pejy.
Ao amin'ny pejy SEO dia manondro ireo lafin -javatra eo ambany fifehezanao ao anatin'ny tranonkalanao. Ho tafiditra ao anatin'izany ny hafainganam-pandehan'ny tranokala, ny fahombiazan'ny kaody, ny kalitao ary ny fandaharan'ny tranokalanao. Zava-dehibe daholo izany amin'ny fampivoarana SEO ataonao.
Ny off-page SEO dia misy antony toy ny backlink avy amin'ny tranokala hafa, répertoire de media sosialy ary paikady ara-barotra hafa ivelan'ny tranonkalanao. Ny lafin-javatra SEO tsy misy dikany lehibe indrindra dia misy ny isan'ny backlink ary ny kalitaon'ireo backlink ireo.
Tsara ho anao raha misy tranokala kalitao avo lenta amin'ny indostria mampitohy ny tranokalanao. Tian'i Google izany ary ho ambony ny tranonkalanao.
Na izany aza, ny zava-dehibe indrindra azonao atao dia ny manome ny votoaty avo lenta tsy tapaka. SEO dia lalao maharitra.
Ho tonga ny laharam-pahamehana Google mialoha raha mifantoka amin'ny famoronana votoaty mahavariana ianao. Hifandray amin'ny tranokalanao ny olona ary handefa ny hafa any raha toa ka mamoaka votoaty lehibe ianao.
Semalt dia manolotra serivisy feno serivisy SEO, samy mandoa na maimaim-poana. Raha ny marina, azontsika atao ny mampivoatra ny tranokalanao sy mihazakazaka ary mivoatra, ao anaty tranobe iray.
Ireto ny serivisy atolotray:
Platform fampiroboroboana automated
Andao hametraka vetivety ny fanompoana tsirairay. Hanome anao ny hevitra tsara kokoa momba izay mety hahasoa anao izany.
Ny fonosana AutoSEO no antsoinay hoe "trano feno" ho an'ny orinasan-tserasera. Miaraka amin'ity fonosana ity, azonao:
Fanatsarana ny fahitana amin'ny tranokala
On optimization optimization
Ny fikarohana amin'ny teny fanalahidy
Tatitra momba ny analyst Web
Namorona ny tranokalanao mahavariana ianao. Azontsika atao ny Google.
Mampiasa teknika antsoina hoe "satroka fotsy" SEO, afaka manatsara ny fifamoivoizana ianao manomboka amin'ny $ 0.99 fotsiny.
AutoSEO no tsara indrindra ho an'ny:
Tompona orinasa madinika
Eny an-tampon'ny serivisy SEO fototra - toy ny fanatsarana anatiny, ny fanitsiana ny tsy fetezana, ny fanoratana ny votoatiny, ny fidinana rohy ary ny fanohanana - mahazo be lavitra amin'ny FullSEO ianao.
Ny ekipanay SEO dia hamolavola drafitra manokana ho anao sy ny orinasanao. Hitanay izay ilainao mba hahitana avo kokoa ary avy eo hampihatra ny drafitra hanatsarana ny tranokalanao.
FullSEO no tsara indrindra ho an'ny:
Amin'ny alàlan'ny Semalt Web Analytics, azonao atao:
Hamarino ny laharan'ny tranokalanao
Ataovy hita misimisy kokoa ny tranokalanao
Tazano tabilao amin'ny tranokala mpifaninana
Fantaro ireo lesoka momba ny fanamafisana ao amin'ny pejy
Mahazoa tatitra momba ny laharan'ny tranokala
Mba hahafantaranao ny fomba hanatsarana ny tranokalanao dia mila mahita ireo singa tsy hita. Miaraka amin'ny valalalanay, afaka mahita teny fanalahidy natokana ianao, tadiavo ny tadiavin'ny olona ary ambaranao ny tsiambaratelon'ny fifaninanana ataonao.
Ny tranonkala Semalt dia tsara indrindra ho an'ny:
Handeha lavitra hanangana ny tranokalanao ho anao izahay. Mamorona tranonkala mahavariana sy matihanina izahay izay mandray ireo mpitsidika ary manondro azy ireo amin'ny lalana.
Ny fijerinao sy ny hafainganan'ny hafainganao dia misy fiantraikany amin'ny taham-bokao sy ny fotoana fijerin'ny pejinao. Ary hisy fiantraikany amin'ny SEO anao.
Izany no antony mahatonga ny tranokala tsirairay noforoninay ho haingana, mora hivezivezy ary feno tsara ho an'ny SEO.
Be dia be ny horonantsary ary tsy mitsaha-mitombo intsony. Izany no antony ilainao horonan-tsary matihanina mba hampivoarana ny tranokalanao.
Tsy vitan'ny mampihetsi-po sy mampahafantatra ny mpanjifa fotsiny ny horonan-tsary fa mitazona azy ireo bebe kokoa amin'ny tranokalanao. Ary tsara izany ho an'ny laharan'ny SEO anao.
Miaraka amin'ny serivisy famokarana horonantsary, hanampy anao izahay:
Amboary ny hevitra
Soraty ny script
Avoahy ilay video
Manome talenta fanamafisam-peo matihanina aza izahay!
Ny famokarana horonantsary no tsara indrindra ho an'ny:
Raha ny marina, afaka manohy ny momba ny vokatra sy serivisintsika isika. Izany dia satria tianay ny zavatra ataontsika.
Mety hanampy anefa ny mandre izay nolazain'ireo mpanjifanay teo aloha momba antsika. Ka ity misy vitsivitsy momba ny valintenin'ny mpanjifa tiana ...
"Nampiasa Semalt izahay ... mba ho lasa tranokala ambony eo an-toerana nandritra ireo telo taona lasa," hoy i Kristian avy ao amin'ny MALO CLINIC. "... Raha te hanatsara ny toerana ianao, dia i Semalt no torolàlana tsara indrindra."
"Iray amin'ireo orinasa SEO tsara indrindra tsy maintsy lazaiko," hoy i Wojtek ao amin'ny Msofas Limited. “Nanandrana orinasa SEO marobe aho fa tsy nahazo izay notadiaviko. Saingy tamin'ny Semalt no nahazoako azy. ... Azon'izy ireo ny zavatra ilain'ny tranokalaniko ary nataony ho fanatsarana ny asako izany ary nampitombo ny fidiram-bolako izy tamin'ny farany. ”
"Faly be izahay tamin'ny tompon'andraikitra Volodymyr Skyba, tamin'ny antso an-telefaona, mailaka ary tatitra isan-kerinandro amin'ny fiteninay manokana," hoy i Jose, mpiteny Espaniola avy ao amin'ny Baja Properties. "Isan'ny isa eo amin'ny karazan-teny maro mifangaro ao amin'ny indostrianay ary ny làlana dia nandondona ny mailaka anay nandritra ny volana maromaro izao. Na eo aza ny maha-webmaster ahy dia mbola manontany tena aho hoe inona no vitan'izy ireo mba hanatanterahana izany. ”
Mazava fa tia antsika ny mpanjifantsika. Ary tiantsika miverina tsara izy ireo!
Vantany vao miverina amin'ny pejin'ny tranonkala Semalt ianao , ny zavatra voalohany hitanao dia fitaovana maimaim-poana izay mampiseho ny kalitaon'ny sehatry ny sehatra misy anao. Ampidiro tsotra fotsiny ny URL-nao ary tsindrio "Start Now."
Aorian'ny fanaovana izany dia ho voatarika hisoratra ianao. Nataontsika mora araka izay azo atao io dingana io - ampidiro fotsiny ny adiresy mailakao, mamorona tenimiafina, ary ambarao anay ny anaranao.
Ho afaka mahazo ny tatitrao ianao, ary ahitàna fampahalalana fanampiny avy hatrany ao amin'ny efitranonao.
Aorian'ny fisoratana anarana dia hoentina mankany amin'ny efitranonao ianao. Eto ianao dia afaka mahita ny laharana misy anao, mahazo ny famakafakana tranokala ary mamorona tetikasa vaovao.
Any ankavanana, ho hitanao ny teny fanalahidy sy ny laharam-pitehirizanao ho an'ny tsirairay. Azonao atao aza ny manampy teny fanalahidy vaovao ary mahita ilay tatitra momba ny teny feno famakafakana feno.
Amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny tabera Website Analyzer eo ambany ankavia, afaka mahita ny:
Ny fijerin'ny pejy isaky ny mpitsidika
Isan'andro eo amin'ny tranokala
Fampahalalana momba ny SEO antsipirihany
Hafainganana sy fampiasana
Data sy mpikirakira fiarovana
Torohevitra momba ny fomba ahafahanao manatsara ny tranokalanao
Azonao atao koa ny mandeha ao amin'ny tabilao Report Center mba hamoronana tetikasa sy tatitra momba izany.
Amin'ny tatitrao dia azonao atao ny manampy sivana, filaharana, filaharam-potoana ary laharana misy daty. Fanampin'izay, azonao atao ny mandamina ny fotoana sy ny fotoana hitrandraka ny tatitrao ary halefa aminao.
Tena rehetra, afaka mahazo fampahalalana sy statistika mahasoa betsaka miaraka amin'ity fitaovana maimaim-poana ity ianao.
Ary mazava ho azy, afaka manavao ianao mba hahazo fanampiana bebe kokoa amin'ny tranonkalanao. Amin'ny fanaovana izany dia afaka manampy anao miakatra eo an-tampon'ny valin'ny fikarohana ianao, noho ny fahaizanay, loharano, fahalalana ary mpikambana ambony ao amin'ny ekipa.
Ity famerenana Semalt ity dia mampiseho anao ny maha-manampy ireo serivisy SEO maimaim-poana sy andoavam-bola ireo ho an'ny laharan'ny tranonkalanao. Ary ny tsara kokoa ny laharan'ny tranokalanao, ny fandraharahana bebe kokoa izay azonao hiteraka.
Ka raha te hanatsara ny traikefanao SEO sy ny mpitsidika ianao dia nanarona anao izahay avy amin'ny zoro rehetra.
Rehefa avy nahazo ny kaontinao tranonkala maimaim-poana ianao dia afaka misoratra anarana, ary hifandray avy hatrany izahay!